Home Wararka Cunida Jaadka laga keeno Kenya oo laga helay cudur halis ah
Cunida Jaadka laga keeno Kenya oo laga helay cudur halis ah
Daraasad ay sameeyeen koox cilmi-baarayaal ah ayay ku sheegeen in noocyada qaadka ee loo yaaqaanno Miiraa iyo Muguka ay xamabaarsanyihiin bakteeriya fara badan oo dhalin karta xanuunno.
Kooxda cilmi baarista samaysay oo ka kala socday kulliyadda beeraha Jaamacadda Jomo Kenyatta iyo Machadka cilmi-baarisyada caafimaad ayaa sheegay in dadka adeegsada labadan nooc ee qaadka ka midka ah ay halis ugu jiraan in ay haleelaan xanuunno halis ah oo ka dhalata bakteeriyada ay xambaarsanyihiin.
Cilmi-baarayaasha ayaa ku taliyay in laamaha faya dhowrku ay ula macaamilaan goobaha lagu iibiyo qaadka si la mid ah sida ay ula macaamilaan maqaayadaha laga cunteeyo nadaafaddoodana xil weyn la iska saaro.
Ganacsatada ka ganacsata qaadka ayay tilmaameen in ay waajib tahay in ay qaataan shahaadooyin caafimaad oo dib loo cusbooneysiiyo saddexdii biloodba mar.
Kooxda ayaa sheegay in goobaha lagu iibiyo qaadka ay lagama maarmaan tahay in ay yeeshaan adeegyada muhiimka u ah faya dhowrka sida qasabadaha biyaha.
Maamulka Nayroobi ayay kula taliyeen in ay dhisaan dukaamo leh halbeeg caafimaad oo lagu iibiyo qaadka.
Daraasadda kooxdan ay daaha uga rogeen in jeermis halis ah uu xambaarsaanyahay qaadka laga sameeyay deegaannada Eastleigh, Kawangware, Kibra, Mathare iyo Dandora.
Dadka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka isticmaala qaadka la sheegay in uu xambaarsanyahay jeermis tiro dhaafay oo sababi kara cudurradda halista ah.